मोडेलिंग बच्चाहरु को लागि वजन
आफ्नो बच्चा2वर्ष छ? र शायद 3? त्यसपछि यो सिर्जना गर्न समय। र मोडेलिंग लागि वजन यस कठिन कुरा मास्टर मदत गर्नेछ। बच्चाहरु संग मस्तिष्क को एक विशेष जडान ठीक मोटर औंलाहरु। अधिक विकसित यो पनि छिटो र अधिक सही कुरा बच्चा हुन छ। यो खोज अमेरिका देखि वैज्ञानिकहरू द्वारा गरिएको थियो र अनुसन्धान डाटा सबै समय को सबै भन्दा विकास खेलौना नाम अनुमति - plasticine। तर अब हामी यसको बारेमा pry छैन, तर जवान मूर्तिकारहरूले लागि थप उपयुक्त छ जो विकल्प।
sculpting लागि वजन पारंपरिक माटो भन्दा लाभ धेरै छ। सबै को पहिलो, यो आफ्नो औंलाहरु पनि साना बच्चाहरु सुत्छन् सक्नुहुन्छ, र बच्चा सिर्जना भविष्य को अर्को भाग कुँदनुहुन्छ पनि भने, यो पनि कठिन हुने छैन भौतिक छ। मुख्य रूप आमाबाबु र बाल सदन शिक्षकहरू मूल्यांकन गर्नेछ भन्ने अर्को फाइदा - यो लुगा लीन छैन, जो मा हतियार गर्न मोल्ड र काम सतह। रंग जनसंचार कुनै पनि मात्रात्मक अनुपात विकल्प मा एक वर्दी रंग सम्म मिश्रित मोडेलिंग लागि ठूलो छ, किनभने आनंद से छक्क मात्र हो तर पनि रंग र आफ्नो संयोजन सिर्जना मा पहिलो अनुभव प्राप्त गर्ने अवसर दिन। र एक टुक्रा मा इन्द्रेणीजस्तैखुशी गर्ने एक टिप छ गर्नेहरूका लागि - लामो समय को लागि रंग मिश्रण छैन र ठूलो बहु-रंग ढाँचा प्राप्त।
यो सबै अहिलेसम्म यो चमत्कार वजन को merits को पूर्ण विवरण छ। तपाईं बच्चाको पहिलो कृति वा राम्रो नमूना बचत गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो सामाग्री एक उत्कृष्ट छनौट हो। लामो समय को लागि हावा मा जम्छ sculpting लागि वजन सबै प्रिय राख्नुभएको राख्ने। तर कहिले काँही यो ठूलो को क्षमता ठीक बन्द भएको थियो छैन, कि र, 24 घण्टा रूपमा प्रतिज्ञा यो अप सुकेको हुन्छ। के गर्ने? छर्कनु पानी र hermetically बन्द गर्नुहोस्। एक समय पछि पनि धेरै जम गांठ प्लास्टिक र थप प्रयोगको लागि उपयुक्त हुन्छ।
साथै, त्यहाँ हावा र ओवन मा कठोर, मोडेलिंग को धेरै छन्। तर, यो विकल्प वयस्कहरूको लागि थप उपयुक्त छ - यो थप कठोर र आत्म-गरे, उदाहरणका लागि, उनको आमा देखि एक उपहार, बच्चा सक्दैन छ।
रचनात्मक कामको लागि सामाग्री को आधुनिक बजार sculpting लागि वजन विकल्प को एक किसिम को भरिएको छ। एक "नरम माटो" उत्पादन ट्रेडमार्क, यसको उत्पादन दायरा थपिएको थपिएको छ। धेरै रंग को एक सेट, व्यक्तिगत प्याकेजिङ्ग मा एक रंग मा, नियन, चमक मिठाई, फलफूल को गन्ध संग, अन्धकारमा चमक: त्यहाँ sculpting लागि तौल छ किन कि छ। यो सुकाउने समय 8 24 घण्टा देखि दायरा। केही जनता विषयमा रहन सक्छ, तर सजिलै ड्राई गर्दा ब्रश हटाइएका छन्।
एउटा माटोको sculpting लागि सबैभन्दा लोकप्रिय वजन। निर्माता - ओरेन्ज हात्ती (ओरेन्ज हात्ती), रूस। एउटा माटोको sculpting लागि वजन विदेशी analogues, तर धेरै सस्ता फरक छैन। मात्र नकारात्मक - कम्पनी छोराछोरीको सुरक्षाको लागि स्वादिष्ट स्वाद संग भिन्न उत्पादन गर्दैन। जनसंचार मा हुनत, हानिकारक घटक वा colorants समावेश गर्दैन। विशेष प्राकृतिक आधार।
मोडेलिंग लागि वजन मजेदार प्लस - संख्याले एक बल जस्तै हाम फाल्न सक्नुहुन्छ। हरेक बच्चा सबैतिर खेल्न अनुमति जो पनि एउटा सानो skipjack, होइन उल्लेख थप सजावटी कुरा मद्यपानोत्सव गर्न चाहनुहुन्छ हुनेछ।
एउटा माटोको sculpting लागि वजन 8 घण्टामा कठोर र3वर्ष पुरानो बच्चाहरु को लागि डिजाइन गरिएको छ। तर, बच्चा वयस्क को सख्त पर्यवेक्षण अन्तर्गत sculpt भने, तपाईं विगतमा आधारभूत तथ्याङ्कले प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई, यो सामाग्री को सजावट छोराछोरी मात्र होइन तर आमाबाबुको लोभ्याउन हुनेछ विश्वास गर्छन्। मात्र नकारात्मक, जो यस्तो आदर्श सामाग्री पाउन सकिन्छ -, यो पनि पातलो र अग्लो आंकडा गर्न असम्भव छ plasticity कोमलता सुझाव। तर, तपाईं अलग सर्किट बनाउन र सुकाएपछि इकट्ठा भने, पानी समाप्त संग moistened, त्यसपछि सबै बाहिर आउन पर्छ।
प्रेरणा र तपाईं masterpieces र आफ्नो मनपर्ने बच्चा!
बिरालो पोशाक - दल र costumed शो को अधिकता को स्थिर विशेषता
आफ्नो हातले गत्ता देखि Dollhouse: एक सानो धैर्य र कृति तयार छ
आफ्नो हातले डिजाइन गत्ता
कसरी छुट्टी लागि फूल को एक कचौरा बनाउन
साटन रिबन को फूल कसरी बनाउने बारे एउटा लेख
बाँदर हुक: वर्णन, क्षेत्रीय, मास्टर-वर्ग
नाक "Grippferon" शिशुहरू र बच्चाहरु मा खस्छ
छोराछोरीको Pediculosis: तपाईंलाई थाहा पाउनुपर्ने?
अवधारणा को सैद्धान्तिक विकास: उद्देश्यबारे के हो
आफ्नै हातले सिलाई मिसिन को मरम्मत। को सिलाई मिसिन स्थापना
कसरी "Maynkraft" मा कार्ड स्थापना गर्न र तिनीहरूले के छन्
ताजिकिस्तान: विवरण, जनसंख्याको आर्थिक विकास। ताजिकिस्तान, पूर्व सोभियत संघ
Novomikhailovsky, "आँधी" (मनोरञ्जन केन्द्र): जीवन समीक्षा
क्लासिक को राइटर्स र कलात्मक शैली एउटा उदाहरण
को निगालो के छ: प्रश्न सरल जवाफ
फाइल अन्तिम फाइल प्रणालीको लागि पनि ठूलो छ कि सन्देश उन्मुक्ति कसरी
को Horoscope र ज्योतिष मा ग्रह
लारिसा Phaselis राजकुमारी5* (टर्की, Kemer): होटल, सेवा, को विवरण